30 Soomaali qaxootiga ah oo lagu dilay duqeyn ka dhacaday dalka Yemen – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
30 Soomaali qaxootiga ah oo lagu dilay duqeyn ka dhacaday dalka Yemen
Mareeg.com: Ilaa 30 qof oo Soomaali qaxooti ah ah ayaa ku dhintay weerar toddobaadkan ka dhacay dalka Yemen gaar ahaan woqooyiga Cadan, halkaas oo lagu bartilmaameedsaday 2 bas oo ay saarnaayeen dad Soomaali ah oo colaadda ka cararayey.
Warar dheeraad ah oo kasoo baxay duqayntaas oo dhacday maalintii Axaddii ayaa sheegaya in diyaarado dagaal ay gentaal la beegsadeen, dad Soomaali u badan oo qaxooti ah oo saarnaa baabuur basas ah, kuna sii jeeday magaalada Cadan.
Dadka la duqeeyey ayaa la sheegay iney deganaa jireen xerada Al-kharas ee dalka Yemen, balse markii ay halkaas ka carareen ayaa lagu duqeeyey jidka isku xira Sanca iyo Cadan.
Safaaradda Soomaalida ee Sanca ayaa sheegtay inay heshay warar sheegaya dad ku dhow soddon qof inay dhinteen. Waxaa loo badinayaa iney duqeyntaas geysatay mid ka mid ah diyaaradaha Isbaheysoga Sacuudigu hogaamiyo ee duqeynta ku haya Jabhadda Xuuthiga.
Ilaa hadda lama garanayo diyaaradaha gaystay duqayntaasi, waxaase dalka Yemen ka socda weerarro dhinaca cirka ah oo ay horesed ka tahay dawladda Sucuudiga.
Cadaado amaanka la adkeeyey iyo roob xoog leh oo da’ay (Sawirro)
Kismaayo: Baarlamanka Jubaland oo doortay gudoomiye iyo labo ku-xigeen (Sawirro)